★မြန်မာ့အလင်း★: ဇလွန်ဆရာတော်ကြီး၏ မပုတ် မသိုးသည့် ရုပ်ကလတ်တော်
အထက်ပါဗီဒီယိုကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရဟန္တာလို့ သမုတ်ရမည့် ဇလွန်ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလတ်တော် ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်၏ အလောင်းတော်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာသည့်တိုင်အောင် မပုတ်မသိုးသည့် အပြင် ဆံတော်များပင် ရှည်ထွက်နေသည်ကို ဖူးမြင်နိုင်ပါသည်။ ဗိုက်တော် နှင့် ပေါင်တံတို့ကို ရိုက်ပြထားသည်မှာ အကြောင်းမဲ့တော့ မဖြစ်နိုချေ။ မပုတ်မသိုးအောင် ပေါင်မှ အသားလှီးပြီး ဆေးသွင်းခဲ့မှု မရှိသည်ကို ပြသလိုဟန်ရှိပါတယ်။ မာမီလုပ်လိုသည့်အခါတိုင်း အတွင်းမှ ကလီစာဖြစ်သည့် အသဲ၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်၊ နှလုံး၊ ဦးဏှောက်တို့ကို ခွဲထုတ်ပြစ်ရပါသည်။ ထိုကလီစာများနှင့် မပုတ် မသိုးအောင် လုပ်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့အတွင်းမှ ကလီစာများကို ထုတ်ထားသည့် ဗိုက်ခွဲရာမရှိကြောင်း သိမြင်စေရန် ဗိုက်တော်ကို ရိုက်ပြသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
လူတိုင်းသည် အမျိုးမျိုး လိမ်ညာနေကြပါသည်။ အသက်ရှင်စဉ်တွင် မူဟန်အမျိုးမျိုးဖြင့် လိမ်ညာနိုင်သော်လည်း အသက်သေသောအခါတွင် ဘယ်လိုမှ လိမ်ညာလို့ မရနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ကျေးရွာလေးအတွက် မပုတ်မသိုးအောင် လိမ်လည်ဖို့ ဆေးနှင့်နည်းပညာမှာ များစွာ ဈေးကြီးလွန်းသဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ယခုအလောင်းတော်သည် ပြုပြင် စီရင်ထားခြင်းမရှိသော ဆရာတော်၏ အလောင်းတော်သာဖြစ်ပေါသည်။
ယခုလိုရှင်းပြရခြင်းမှာ ဆရာလုပ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မိမိတို့ ဘာသာကို အစွန်းရောက်လွန်းသော သံသယများရှိနေသောကြောင့် သိမှတ်ထားသည်များကို ဝေငှလိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုး ဇလွန်ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလတ်တော်ကို ကြည်ညိုရင်း အမျိုးသာသာ၊ သာသနာအတွက် ဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေ။
ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဖေါ်ပြသည့် ဇလွန်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ရုပ်ပလပ်သည် တကယ့်ဖြစ်မှန် ဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ပလပ်တော်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း သံတွဲမြို့ (ငပလီရှိသော မြို့)၏ တောင်ဘက်ပိုင်း ၁၀ မိုင်အကွာ ရှိ ဇလွန်ရွာလေးတွင် ယနေ့တိုင် ရှိနေလေသည်။ ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူသည်မှာ နှစ် ၂၀ ရှိခဲ့လေ ပြီ။ ဇလွန်ရာကလေး၏ ရာဇ၀င်မှာ မြန်မာဘုရင်များ ခေတ်မှ ရခိုင်ဘုရင်အား လာရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည် မြန်မာ့စစ်မှုထမ်းများနှင့် စစ်ရိက္ခာ သယ်ဆောင်ရန် ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်း ဇလွန်မြို့မှ လုပ်သားများမှ ဆင့်ပွားခဲ့သည့် မျိုးဆက် ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်သည်များမှာ မြန်မာ မွတ်စ်လင်များ ဖြစ်၍- သူတို့နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့် ဧရာဝတီ ဇလွန် ဇာတိအမျိုးသမီးတို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည်။ နောင်သော် သားသမီးမျိုးဆက်များမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလိုက်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည် မျိုးဆက် ၂ ဆက်အထိ မွတ်စ်လင် အမည်ခံ အကြွင်းအကျန်များ ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည် ရခိုင်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း များစွာ နေထိုင်လာခဲ့လျှက်- ယခုအချိန်ထိ မိမိကိုယ် မိမိ ဗမာဟု ခံယူကြသည်။ ဇလွန်ရွာနှင့် မနီးမဝေးတွင် မြန်မာပြည်မ နာမည်များ ဖြစ်သော ဖိုးဝကုန်းရွာ၊ တံခွန်တိုင်ရွာများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုရွာများတွင် မြန်မာမွတ်စ်လင် အကြွင်းအကျန်များ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုလူများကလည်း မိမိကိုယ်မိမိ ဗမာဟု ခံယူ၍ ရခိုင်မွတ်စ်လင် ဆရာများနှင့် အယူဝါဒ မတူကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဇလွန်ရွာ၌- မွတ်စ်လင်များ မရှိသော်လည်း ဇလွန်ရွာသားများသည် မွတ်စ်လင်များ နှင့် ပြသနာမရှိပါ။ ယခု ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဖေါ်ပြသည့် ဆရာတော်ကြီး မပျံလွန်မှီက ဆရာတော်ကြီးအား ၀တ္ထု ဆွမ်းကွမ်း ဆက်ကပ်သည့် သူမှာ ဦးဆွာလေဟ်ခေါ် မွတ်စ်လင် ဖြစ်သည်။ သံတွဲမြို့နယ် ဇာဒီပြင်ရွာသား ဖြစ်သည်။ သူ့ဇနီးမှာ ဇလွန်အစိုးရ ဆေးခန်းမှ နာ့စ်မ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူပြီးနောက် ရုပ်ကလပ်တော်မှ ဆံမုတ်ဆိတ်များ။ လက်သည်း ခြေသည်းများအား စင်ကြယ်ပေးသည်မှာလည်း ဦးဆွာလေ ဖြစ်သည်။ ကျနော် ဇလွန်ရွာမှ ထွက်လာခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်ထိ ရုပ်ကလပ်တော်၏ ဝေယာဝစ္စများကို ဒုက္ခခံ ပြုလုပ်ပေးနေသူ ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မသိပါ။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်၏ ရုပ်ကလပ်အား ဖေါ်ပြလျှက် မွတ်စ်လင်မုန်းတီးရေး၌ အသုံးပြုနေခြင်းကို ကန့်ကွက်ပါသည်။
အော် ခက်သား အတော့်ကို မိုက်ရိုင်းတဲ့ လူတွေဘာလား ... ခင်ဗျားတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို မှားပါတယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောနေလို့လဲ ... အခု ဟာက ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဒီလို မှတ်ကျောက်တင်စရာတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောနေတာ...တကယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမှာ အဲဒီ့လို မှတ်ကျောက်တင်စရာ ရှိရင်လည်း ပြပေါ့ မရှိဘူးဆိုရင်လည်း ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပေါ့... သေချာတာတခုကတော့ ခင်ဗျားတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာက ယျဉ်ကျေးကောင်း ယျဉ်ကျေးလိမ့်မယ့် ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ကတော့ အတိအကျကို မိုက်ရိုင်းလွန်းတယ်...
မျိုးရိုးအစဉ်အဆက် မရှိတဲ့ အခြောတ်ကြီး ဘုတ်ဒ ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ခွေးဗမာ လူမျိုး
ငါလီး ကိုလာပြီး မှတ်ကျောက် လာတင်
ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျား၊ လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် အစရှိသော လူ့အခွင့်အရေးများရှိကြပါသည်၊မိမိယုံကြည်ရာလမ်းလျှောက်လှမ်းကြပြီး မိမိလမ်းမိမိ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ကြသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဒ၏အဆုံးအမများဖြစ်ပါသည်၊ အပြစ်ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့် ဘာသာရေးရန်တိုက်သွေးခွဲခြင်းပြုမူရအံ့နည်းဟု စဉ်းစားမရပါ၊ ယခုကဲ့သို့ပြုမူထားခြင်းသည် ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတွင် တစ်ပါးသော အချက်အားချိုးဖေါက်မိသည်ကိုသတိပြုမိပါသလော၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သာမက အုပ်စုလိုက် ပြသနာကြီးထွားနိုင်သည်ကိုရောသတိပြုမိပါသလော၊ ယဉ်ကျေးလှပါသည်ဆိုသောရှေးအစဉ်အဆက်ထိန်းထားသည့်ဂုဏ် ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုဝန်ခံရာရောက်ပါသည်၊
မနေနိုင်၍၀င်ကာရေးရပါသည်။ သူများဘာသာစော်ကားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေလျှင် ကိုယ့်ဘာသာလည်းအစော်ကားခံရမည်မှာ တရားပါသည်။ မိမိတို့ဘာသာတရားအမည်ခံ မိရိုးဖလာနှင့်တင်းတိမ်ရောင့်ရဲပြီး သူတစ်ပါးဘာသာကိုသွားမစော်ကားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊ မိမိတို့ဘာသာတရားအမည်ခံ ပြီး ဘာသာရေးအခြေခံများကိုမသိရှိ ခဲ့၍ (ငါးပါးသီလမြဲသူတောင် ရှားပါးလာ၍)လူမျုိုးရော တိုင်းပြည်ရော၊အစိုးရရော အလုံးစုံပျက်ဆီးရေးဦးတည်နေသည်ကို သတိပြုစေခြင်ပါသည်၊ မိမိကိုယ်မိမိ တာဝန်ယူပြုပြင်ယုံနှင့်လုံလောက်ပါသည်၊ ယခုရေးသားချက်သည် ကျွန်နုပ်၏ခံယူချက်ဖြစ်၍ မကျေနပ်လျှင် novote2010@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ဆဲဆိုနိုင်ပါသည်။
မွတ်ဆလင်ဖြစ်စေ၊ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ ဘယ်သာသာတရားခံယူထားထား လူသားများဖြစ်ကြသည်ကိုသတိပြုစေလိုပြီး၊ယခု ကွန်မန့်ဖြင့် အားလုံးကိုကျေအေးရန်ကြားဝင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။မိမိတိုယုံကြည်ရာတရားများအား မိမိဘာသာဆန်းစစ်ကြပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ကြရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
( သူများဘာသာစော်ကားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေလျှင် ကိုယ့်ဘာသာလည်းအစော်ကားခံရမည်မှာ တရားပါသည်။ မိမိတို့ဘာသာတရားအမည်ခံ မိရိုးဖလာနှင့်တင်းတိမ်ရောင့်ရဲပြီး သူတစ်ပါးဘာသာကိုသွားမစော်ကားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊ )
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကျွန်ကုလား No
သူများဘာသာကို စော်ကားရင် ကိုယ့်ဘာသာကို အစော်ကားခံရမည်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ကုလားတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ခရစ်ယာန် ၊ ဟိန္ဒူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာ ငါတို့ အဖိုးအဖွားတွေ မမွေးခင်ကတည်းက။ မွတ်ဆလင်ဟာ ငါတို့ ဘာသာကိုစော်ကားခဲ့တာ မနည်းတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အခုသူတို့ အစော်ကားခံရပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ငါတို့ လုပ်ရပ်သည် တရားမျှတပါသည်။ ဒါနဲ့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားတွေဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
ခွေးသခိုးမွတ်ဆလင်တွေ မင်းတို့မိုဟာမက် ဘာကောင်လဲ ခွေးလောက်မှဂုဏ်မရှိအသိမရှိတဲ့မိုဟာမက် မိုဟာမက်ရဲ့အဖေကဘယ်သူလဲ အမေကဘယ်သူလဲ သူ့မျိုးရိုးကဘာလဲ မင်းတို့မွတ်ဆလင်တွေဘယ်သူပြောရဲလဲ ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို လူတွေရှေမှာဘယ်သူပြောရဲလဲ မေးလိုက်ရင် မိုဟာမက်ကပြောတယ်မပြောရဘူး မင်းတို့မပြောရင်ငါပြောမယ် မင်းတို့မိုဟာမက်ကခွေးသား သူ့အဘိုးကဝတ်နဲ့လိုးပြီးမိုဟာမက်အမေကိုမွေးတယ် မိုဟာမက်အမေကခွေးနဲ့လိုးပြီးမိုဟာမက်ကိုမွေးတယ် မွတ်ဆလင်တွေဘယ်ပြေရဲမလဲ ဂုဏ်မှမရှိတာဘာကြောင့်ဝက်ကိုကြောက်လဲဘယ်မွတ်ဆလင်ဖြေမလဲဖြေ မင်းတို့ကိုမြန်မာမြေကမောင်းထုတ်မယ်
ဒီကတုံးအလောင်းကြည့်တာနဲ့တင်အန်ချင်လာတယ်ကွန်ပြူတာတောင် နံစော် ရလာသလိုပဲ...ဒီဟာသေချာတယ် ဆိုရင်တော့ဒီကတုံးဗုဓ္ဒထက်စွမ်းမယ်ထင်တယ်.....ဘာကြောင့်လဲဆို ရင် ဗုဓ္ဒနဲ့အလောင်းတောင် ပုတ်သွားလို့ ကနေ့ထိမရှိတာပဲ..ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တွေ ဒီအလောင်းကိုပဲ ကိုးကွယ်လိုက်ကြတော့.ဘယ့်နှယ ရဟန်းတွေလည်း ပျံပြရတာနဲ့၊ အလောင်းတွေလည်း မပုတ်ရတာနဲ့၊ ဟိုဘုရားမှာ ဟိုလိုဖြစ်ပြန်ပြီ.ဟိုဘုန်းကြီးက ဒီလိုကိုယ်ယောင်ပြတယ် နဲ့အမျိုးမျိုးလိမ်ကို လိမ်နိုင်လွန်းတယ်. အခုခေတ်မျက်လေ့ စရာတွေနင်တို့ရဲ့ ဘုရားတွေထက်တောင်ပိုစွမ်းတယ်.ငါကတော့ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တွေကို ရည်ချင်လိုက်တာ.ဒါပေမယ့် စော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး.ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကို စဉ်းစားခိုင်းစေချင်တာပါ.
ကိုယ်.အမေကိုလိုးခွေးကုလားတွေ ချီးစားပြီးခွေးစကားလာမပြောနဲ.ကွ။မင်းတို.ခွေးမျိူးတွေမြန်မာနိုင်ငံရောက်ခါစကဘာလုပ်ရလဲ ချီးကျုံးရတာမလားမင်းတိုကောင်တွေ ကိုယ်ဘယ်လိုအဆင်.အတန်းကလာတယ်ဆိုတာလည်းပြန်ဆန်းစစ်ကြည်.ပါဦး ဗမာတွေ မြေပေါ်လာပီး ဗမာလီးစုပ်နေရတဲ.ကောင်တွေကများ ကျေးဇူးကန်းတဲ့ခွေးကုလားတွေ